Ama-CNTs Angahlakazeki Angalinganiwe yi-Ultrasonication - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuxhaphaza ukusebenza okuyingqayizivele kwama-carbon nanotubes (CNTs), kumele ahlakazeke ngokuphelele.
Abasabalalisi be-Ultrasonic bayithuluzi elivame kakhulu lokusabalalisa ama-CNTs kokumiswa okwesikhashana okumiselwe amanzi.
Ubuchwepheshe bokuhlakazeka be-ultrasonic budala ngokwanele amandla aphezulu e-shear ukufeza ukuhlukaniswa okugcwele kwe-CNTs ngaphandle kokulimaza.
Ultrasonic Ukuhlakaza of Nanbonubes Carbon
Ama-Carbon nanotubes (CNTs) anesilinganiso esiphakeme kakhulu futhi akhombisa indawo ephansi kanye nendawo ephezulu kakhulu (amakhulu amaningana m2 / g), ebanikeza izakhiwo ezihlukile njengamandla aphakeme kakhulu, ukuqina, nobunzima kanye nokuqina ukuhamba kukagesi okuphezulu nokushisayo. Ngenxa yamandla e-Van der Waals, eheha i-single nanotubes (CNTs) eyodwa, ama-CNTs ahlela ngokujwayelekile emasakeni noma emasokeni. Lawa mandla okuheha okuphakathi nendawo asuselwa kwinto yokubopha ye-π-bond phakathi kwama-nanotubes aseduze aziwa ngokuthi i-π-stacking. Ukuthola inzuzo ephelele kuma-carbon nanotubes, lawa ma-agglomerates kufanele ahlakazeke futhi ama-CNTs kufanele asatshalaliswe ngokulinganayo ekusakazweni okugcwele. Ukuqina kwe-ultrasonication kwakha i-acoustic cavitation ku-kefir. Ngaleyo ndlela kukhiqizwe ingcindezi yendawo yokugunda yasendaweni iphula ama-CNT ahlanganayo bese ibasabalalisa ngokufanayo ekumiseni okungajwayelekile. Ubuchwepheshe bokuhlakazeka be-ultrasonic budala ngokwanele amandla aphezulu e-shear ukufezekisa ukuhlukaniswa okugcwele kwe-CNTs ngaphandle kokulimaza. Ngisho ne-sonNatised sonication ebucayi isetshenziswa ngempumelelo ukuyihlukanisa ngokwehlukana. I-Ultrasonication isanda kukhipha isilinganiso esanele sokucindezela ukuhlukanisa ama-SWNT aggregates ngaphandle kokubangela ukwaphuka okuningi kuma-nanotubes ngamanye (Huang, Terentjev 2012).
Izinzuzo ze-Ultrasonic CNT Disersion
Ama-CNTs ahlakazeka awodwa
Ukusebenza kahle kokuhlakazeka okuphezulu
Ukulayisha okuphezulu kwe-CNT
Akukho ukucekelwa phansi kwe-CNT
I-UIP2000hdT – I-2kW enamandla i-ultrasonicator yokusakazeka kwe-CNT
Isistimu ephezulu ye-Ultrasonic Systems ye-CNT Disersions
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngemishini enamandla nethembekile ye-ultrasonic yokusakazwa kahle kwe-CNTs. Ukuthi udinga ukulungiselela amasampula amancane we-CNT wokuhlaziya no-R&D noma kufanele wakhe izimboni ezinkulu zokusabalalisa ngobuningi, uhla lomkhiqizo lukaHielscher lunikeza uhlelo oluhle kakhulu lwe-ultrasonic ngezidingo zakho. Kusuka I-50W ultrasonicators ukuthola ilebhu kuze Amayunithi we-16kW weyunivesithi ngemikhiqizo yezentengiso, Hielscher Ultrasonics ukwambisile.
Ukuze ukhiqize ama-carbon nanotube wekhwalithi ephezulu, amapharamitha enqubo kumele alawulwe kahle. Amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi nesikhathi sokugcinwa kwemingcele esibaluleke kakhulu sokusatshalaliswa kwe-CNT. Ama-ultrasonicators kaHielscher akavumeli kuphela ukulawulwa okuqondile kwepharamitha ngayinye, wonke amapharamitha wenqubo aqoshwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elihlanganisiwe lezinhlelo ze-digital ze-Hielscher. Iphrothokholi yenqubo ngayinye ye-sonication isiza ukuqinisekisa imiphumela yokuvela futhi nekhwalithi ehambisanayo. Nge-browser ekude ukulawula umsebenzisi angasebenza futhi aqaphe insiza ye-ultrasonic ngaphandle kokuthola indawo yohlelo lwe-ultrasonic.
Njengoba i-nanotubes eyodwa ebiyelwe ngodonga (i-SWNTs) kanye ne-nan nanububes eyakhiwe ngodonga eningi (i-MWNTs) kanye nendawo ekhethiwe enamanzi noma ephakathi nendawo idinga ukucaciswa okuthile kokuqina, ukuvelela kwe-ultrasonic yinto esemqoka uma kukhulunywa ngomkhiqizo wokugcina. Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors angahambisa kakhulu futhi amplople amnene kakhulu. Sungula indawo efanelekile yezidingo zakho zenqubo. Ngisho nezikhuliso ezifika ku-200µm zingaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Amplrodes aphakeme kakhulu, ama-sonotrodes abekwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Amakhasimende ethu anelisekile ngokuqina okuqinile nokuthembeka kwezinhlelo zikaHielscher Ultrasonic. Ukufakwa emikhakheni yezicelo ezisindayo, izindawo ezifunwayo kanye nokusebenza kwe-24/7 kuqinisekisa ukucutshungulwa okusebenzayo nokunempilo. Ukuqina kwenqubo ye-Ultrasonic kunciphisa isikhathi sokucubungula futhi kufinyelela imiphumela engcono, ie izinga eliphakeme, isivuno esiphakeme, imikhiqizo emisha.
Ama-carbon nanotubes (CNTs) ayingxenye yesigaba esikhethekile sezinto ezikhiqizwa yikhabhoni eyodwa, zibonisa izakhiwo ezikhethekile zokukhanyisa, zikagesi, ezishisayo nezokubukeka. Bayingxenye enkulu esetshenziswayo ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwama-nanomatadium athuthukile njenge-nano-composites, polymers aqinisiwe njll. Ngakho-ke asetshenziswa kubuchwepheshe bezwe. Ama-CNTs adalula amandla aphezulu kakhulu, izindawo eziphakeme kakhulu zokudlulisa ezishisayo, izikhala ezisezingeni eliphansi kanye nokuqina kwamakhemikhali nokuqina, okwenza ama-nanotubes abe yisengezo esithembisayo sezinto zokwenziwa eziningi.
Ngokuya ngesakhiwo sazo, ama-CNTS ahlukaniswa ama-nanotubes angabodonga (i-SWNTs), ama-nan nanububes asezindongeni (DWCNTs), nama-carbon nanotubes anogqinsi (MWNTs).
Ama-SWNTs awamashubhu amade angamakhilogremu amade enziwe odongeni lwekhabhoni ye-athomu eyodwa. Ishidi le-athomu lama-carbons ahlelwe epulini lezinyosi. Imvamisa, ziqhathaniswa ngokuqondile namashidi asongelwe phezulu we-graphite eyodwa noma ungqimba.
Ama-DWCNTs aqukethe ama-nanotubes amabili abiyelwe ngodonga olulodwa, enye ingene ngaphakathi komunye.
Ama-MWN ayifomu le-CNT, lapho ama-nanotubes amaningi abiyelwe ngodonga ahlala ngaphakathi komunye. Njengoba ububanzi babo buphakathi kuka 3-30 nm futhi njengoba bekhula ngamasentimitha ambalwa ubude, isilinganiso sabo sesici singahluka phakathi kwezigidi eziyishumi kuya kweziyishumi. Uma kuqhathaniswa ne-carbon nanofibers, amaMWNTs ane-wall ehlukile, ububanzi obuncane obungaphandle, kanye nengaphakathi lendlu. Ezisetshenziswa kakhulu ezitholakala ngenkuthalo zamaMWNTs yiBaytubes® C150P, Nanocyl® NC7000, Arkema Graphistrength® C100, kanye ne-futureCarbon CNT-MW.
Synthesis of CNTsAma-CNTs akhiqizwa indlela ye-plasma based synthesis noma indlela yokuphuma kwe-arc, indlela yokufakelwa kwe-laser, inqubo yokufakwa kokushisa, ukufakwa kwamakhemikhali we-vapor (CVD) noma i-plasma eyenziwe ngcono yamakhemikhali.
Ukusebenza kwe-CNTs: Ukwenza ngcono izimfanelo zama-carbon nanotubes futhi awenze afaneleke ohlelweni oluthile, ama-CNTs avame ukusebenza kahle, isib. Ngokungeza amaqembu e-carboxylic acid (-COOH) noma amaqembu we-hydroxyl (-OH).
CNT Ukuhlakaza Izithasiselo
Izimbungulu ezimbalwa ezinjenge-super acid, u-ionic uketshezi, ne-N-cyclohexyl-2-pyrrolidnone ziyakwazi ukulungiselela ukusakazeka okuphezulu kwe-CNTs, ngenkathi izithambisi ezivame kakhulu kuma-nanotubes, njengeN-methyl-2-pyrrolidone (NMP ), i-dimethylformamide (DMF), ne-1,2-dichrolobenzene, ingasabalalisa ama-nanotubes kuphela ezindaweni ezigxile kakhulu (isib. <0.02 wt% yama-CNTs enodonga olulodwa). Ama-ejenti ajwayelekile wokusabalalisa yi-polyvinylpyrrolidone (PVP), i-Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate (SDBS), iTriton 100, noma iSodium Dodecyl Sulfonate (SDS).
Ama-cresols yiqembu lamakhemikhali wezimboni angacubungula ama-CNTs ekujuleni kwamashumi amashumi ayisishiyagalombili, okuholela ekuguqukeni okuqhubekayo kusuka ekuhlakazeni kwe-dilute, pastes aminyene, namagiya wamahhala angena esimweni esingakaze sibe khona sokudlala, njengokuthi ukulayisha kwe-CNT kukhuphuka . Lezi zifundazwe ziveza izakhiwo ezinjenge-rheological kanye ne-viscoelastic, ezingatholakali nezinye izinto ezivamile, ziphakamisa ukuthi ama-nanotubes empeleni ahlukanisiwe futhi ahlakazeke kahle kuma-cresols. AmaCresols angasuswa ngemuva kokucutshungulwa ngokushisa noma ukugeza, ngaphandle kokuguqula ingaphezulu le-CNTs. [UChiou et al. 2018]
Izicelo ze-CNT Disersions
Ukuze usebenzise izinzuzo ze-CNTs, kufanele zihlakazeke zibe yi-liquid njengama-polymers, Ama-CNTs asakazeke ngokulinganayo asetshenziselwa ukwenziwa kwepulasitiki esebenzayo, ama-crystal shows we-liquid, ama-diode akhipha i-organic, izikrini zokuthinta, ukubonisa okuguqukayo, amaseli elanga, ama-ink enzisayo, izinto zokulawula ezimile, kufaka phakathi amafilimu, amagwebu, imicu yezindwangu, izindwangu zoku polymer nezinto zokunamathisela, ukusebenza okuphezulu kwe-polymer composites ngamandla akhethekile womshini nobulukhuni, imicu ye-polymer / CNT eyinhlanganisela, kanye nezinto zokukhanya ezingasindi.